जापानमा अनौठो विजनेश !
एजेन्सी । तपाईले भाडामा घर, गाडी लिने गरेको त सुन्नु भएको छ होला तर कहिल्यै युवाहरुलाई भाडामा मिल्ने कुरा सुन्नु भएको छ ?
आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै पनि नसुत्ने जीव मौरीबारे थाहा पाउनुहोस् अनौठा कुराहरु
एजेन्सी । जीवहरुमा सबैभन्दा बढी परिश्रमी हो मौरी । आफ्नो जीवनकालमा मौरी कहिले पनि सुत्दैन । एक थोपा महको लागि कैयौं दुरीसम्म यात्रा गर्ने मौरीबारे धेरै रोचक तथ्यहरु रहेका छन् । आज हामी मौरीबारे चर्चा गर्दैछौँ ।
तपाई कत्तिको अभागि पुरुष ?
एजेन्सी । भारतको केन्द्र सरकार ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियान जोडतोडका साथ अगाडि बढाइ रहेको छ । तर, उत्तराखण्डको एक तथ्याङ्कले सरकार नै हच्चकिएको छ । उत्तराखण्डमा रहेका १३२ गाउँमा भएको एक अध्ययनले पछिल्ला तीन महिनामा छोरी नै जन्मिएका छैनन् ।